အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အလုပ်သမားများအတွက် လုပ်ခလစာပေးချေမှု အခြေအနေပြ ဒေတာ NFPဒေတာကို ဂျူလိုင်လ ၇ရက် ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ဤဒေတာသည် လွန်ခဲ့သော လအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်အကိုင်သစ်များ မည်မျှ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကို သိရှိနိုင်မည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းတင်ရာတွင် အရေးပါသည့် ထိုNFPဒေတာကို အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်က အလေးထားပြီး စောင့်ကြည့်လေ့ရှိပါသည်.
NFPဒေတာနှင့်အတူ အလုပ်သမားဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ဒေတာများဖြစ်သည့် အလုပ်လက်မဲ့ဒေတာများ ပျမ်းမျှနာရီအလိုက် လုပ်ခလစာရရှိမှု အနေအထားများကို ထုတ်ပြန်ပေးလေ့ရှိပါသည်. ထိုထုတ်ပြန်ချက်များ အားကောင်းခဲ့ပါက USDတန်ဖိုး အားကောင်းနိုင်ပါသည်. မျှော်မှန်းထားသည်ထက် သိသိသာသာပိုအားကောင်းခဲ့ပါက USDနှင့် တွဲနေသော ငွေကြေးအတွဲများ တန်ဖိုး မြင့်တက်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုထွက်ရှိမည့် ဒေတာများကို ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်ဆောင်ရာမှာ အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.